द,लित भनेर घर बाट निकालेको भनेपछी दिदिहरु आ, क्रोशित हुँदै मिडियामा, दिए यस्तो चे,तावनी,अब के होला ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
द,लित भनेर घर बाट निकालेको भनेपछी दिदिहरु आ, क्रोशित हुँदै मिडियामा, दिए यस्तो चे,तावनी,अब के होला ? (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki June 28, 2021
झापा । सुन्दा अचम्म लाग्दो घटना अहिले झापामा घटेको छ । झापाको कमल गाउपालिका ७ मा रहेको ठुलो बाह्रघरेमा एक युवकले अर्काको श्रीमती भगाएर फेरी फिर्ता गरेका छन् । श्रीमान विदेशमा हुँदा एकै गाउको युवक संग उनि भागेकी थिइन । अहिले ति पिडित युवतीलाई भगाउने कान्छा श्रीमानले छोडेर फरार भएपछी उनको बिचल्ली भएको हो । बिष्णु ताजपुरिया नाम गरेका युवकले बिभिन्न प्रलोभन देखाएर मलाई बिहे गर्छु भन्दै फकाएको उनले बताएकी छिन ।
बिष्णु ताजपुरियाले भगाएको ७ दिनपछि पहिलेकै श्रीमानको घरमा उनलाई छोडी दिएको तर पुर्ब श्रीमान र गाउलेहरुले त्यहाँ बस्न नदिएपछि उनि बिचल्ली परेकी हुन् । अहिले बिष्णु ताजपुरिया फरार रहेको र सम्पर्क बिहिन भएको उनले बताएकी छिन । बिष्णु ताजपुरियाका २ जना छोराछोरी र श्रीमान विदेश हुँदा भाग्ने युवती बोधिका ताजपुरियाका पनि २ जना साना छोराछोरी छन् । तल भिडियोमा जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोला ।